Omenala SPY90-SPY120 Na-aga n'ihu Pre expander Manufacturer and Supplier | Dongshen
DS1100-FDS1660 EPS ogbe ty ...
SPY90-SPY120 na-aga n'ihu Pre ...
PB2000V-PB6000V agụụ ụdị ...
PB2000A-PB6000A Ikuku jụrụ ...
Inside EPS raw beads, enwere ikuku oku a na-akpọ pentane. Mgbe steaming, pentane amalite ịgbasa otú bead size na-etolite ibu, a na-akpọ ịgbasa. Enweghi ike iji EPS raw beads mee bọọlụ ma ọ bụ nkwakọ ngwaahịa na ngwa ngwa, ọ ga-ebu ụzọ gbasaa ngwa ahịa niile wee mepụta ngwaahịa ndị ọzọ. A na-ekpebi njupụta ngwaahịa n'oge Preexpanding, yabụ a na-eme njikwa njupụta na Preexpander.
EPS Na-aga n'ihu Preexpander na-arụ ọrụ iji gbasaa EPS akụrụngwa ka achọrọ njupụta, igwe na-arụ ọrụ n'ụzọ na-aga n'ihu ma na-ewere akụrụngwa ma na-ewepụta ihe gbasaa. EPS n'ihu Pre-expander nwere ike ime nke abụọ na nke atọ mgbasa iji nweta ala njupụta.
EPS Na-aga n'ihu Preexpander zuru ezu na ịghasa ebu, Nke mbụ na nke abụọ mgbasa Loader, Mgbasa Chamber, Fluidized bed Drier
EPS Continuous Preexpander bụ ụdị EPS Machine na-arụ ọrụ na njikwa njikwa. EPS akụrụngwa bụ nke mbụ ejuputara site na ịghasa ebu ka mmeba Loader. Na ala nke loader bụ ịghasa, na-akpali ihe si Loader ka mgbasa ụlọ. Mgbe ị na-akwọ ụgbọ mmiri, osisi na-emegharị ahụ na-agagharị mgbe niile iji mee ka njupụta ihe dị na otu. Akụrụngwa na-aga n'ime ụlọ na-aga n'ihu, mgbe steaming gasịrị, ọkwa ihe na-aga n'ihu, ruo mgbe ọkwa ihe ahụ bịara n'otu ọkwa nke ịtọhapụ oghere n'ọdụ ụgbọ mmiri, mgbe ahụ ihe ga-akpaghị aka. Nke dị elu karịa mmeghe nke ọpụpụ bụ, ogologo oge ihe ahụ ga-anọ na gbọmgbọm ahụ, yabụ belata njupụta ahụ; ala mmeghe mmeghe bụ, mkpumkpu ihe na-adị na gbọmgbọm, yabụ njupụta dị elu. Njikwa igwe na-aga n'ihu ịgbasawanye dị mfe. Ma nrụgide uzuoku siri ike ma ọ bụ na ọ nweghị nnukwu mmetụta na njupụta nke ịgbasa. Ya mere, anyị na-aga n'ihu tupu ịgbasa igwe na-onwem na a Japanese mgbali mbenata valvụ. Iji mee ka uzuoku dị na igwe ahụ dịkwuo ike, anyị na-eji ihe nkedo iji zụọ ihe na ngwa ngwa, na uzuoku na nri dị iche iche dị ka o kwere mee.
Na-aga n'ihu Preexpander
Ihe SPY90 SPY120
Ansionlọ mmeba Dayameta Φ 900mm Φ1200mm
Mpịakọta 1.2m³ 2.2m³
Oke eji 0.8m³ 1.5m³
Steam Ntinye DN25 DN40
Oriri 100-150kg / awa 150-200kg / awa
Nrụgide 0.6-0.8Mpa 0.6-0.8Mpa
Abịakọrọ Ikuku Ntinye DN20 DN20
Drainage Ntinye DN20 DN20
Mmepụta 15g / 1 250kg / awa 250kg / awa
20g / 1 300kg / awa 300kg / awa
25g / 1 350kg / awa 410kg / awa
30g / 1 400kg / awa 500kg / awa
Ihe na-erute ahịrị DN100 Φ150mm
Ike 10kw 14.83kw
Njupụta Mgbasa mbụ 12-30g / l 14-30g / l
Mgbasa nke abụọ 7-12g / l 8-13g / l
N'ozuzu ya L * W * H 4700 * 2900 * 3200 (mm) 4905 * 4655 * 3250 (mm)
Ibu ibu 1600kg 1800kg
Heightlọ elu chọrọ 3000mm 3000mm
Nke gara aga: PB2000V-PB6000V agụụ ụdị ngọngọ ịkpụzi igwe
Osote: DS1100-FDS1660 EPS ogbe ụdị pre expander